Kooxaha Man United iyo Liverpool oo dhibacaha ku qeybsaday garoonka Old Trafford… + SAWIRRO – Gool FM
(Machester) 20 Oct 2019. Kooxaha Man United iyo Liverpool ayaa dhibacaha ku kala qeybsaday garoonka Old Trafford, kaddib markii ay ku kala bexeen barbaro 1-1 ah kulankoodii 9-aad horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood ku kala nasteen 1-0 oo ay ku hogaamineysay kooxda Manchester United oo ku sugneyd garoonkeeda Old Trafford.
Daqiiqadii 36-aad kooxda Manchester Uniter ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay Marcus Rashford, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Daniel James.
Qeybta labaad ee ciyaarta marka dib ay dib isugu soo laabteen labada kooxood, waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad u fiican, waxayna sameeyeen fursado halis ah ee goolal loo filan karay.
Daqiiqadii 85-aad kooxda Liverpool ayaa heshay goolka barbaraha waxaana ciyaarta 1-1 ka dhigay Adam Lallana.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay barbaro 1-1 ah oo ay ku kala baxeen labada kooxood Manchester United iyo Liverpool, kaddib kulan aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Old Trafford.